Ogaden News Agency (ONA) – OYSU Koonfur Afrika oo ka qayb galaysa tartanka oroda 42 km
OYSU Koonfur Afrika oo ka qayb galaysa tartanka oroda 42 km
Posted by ONA Admin	/ September 27, 2012
Tartan orod ah oo lagu qabanayo wadanka koonfur afrika gaar ahaan gobolka Eastern Cape oo ay qabanayaa shirkado ganacsi ah sida shirkada Coca-Cola iyo Afri-save cash and carry oo aad looga yaqaano wadanka koonfur afrika iyo kuwa kalle ayaa waxaa ka qayb galaya dad aad u tiro badan wuxuuna kala leeyahay qaybo kala duwan halka ay qayb waalba ordayaan dad aad u tiro badan.
Tartankan oo abaal gudkiisu yahay sidii caadiga ahayd mid la isku abaal marinayo DAHAB, QALIN iyo LACAG, ayaa bilaaban doona hadii eebe ogalaayo maalinta Sabtida ah 29/09/2012 saacada 05:00 am subaxnimo sacada Afrikada Koonfureed. Hadaba waxaa tar tarnka ka qayb galaya xubin kamid ah ururka dhalinyarada iyo ardayda ogaadeeniya OYSU. Xubinkan oo ordaya qaybta ugu dheer ee 42KM waa Masalax faarax Ibraahim oo ah wiil da’yar oo orodyahan ah. Maslax waxaa u sahlay in uu ka qayb galo tar tankan kambaniga uu u shaqeeyo ee Afri-save cash and carry. Ururka OYSU ayay u tahay guul balaadhan oo u soo hoyatay waxaana Alle ka rajaynaynaa in uu Maslax Faarax noqdo ruuxa guushu ay raacdo in shaa allah.
Waxaa tartankan kaqayb gali doona orodyahano wadanka Koonfur Afrika uga soo orday ciyaarihii olonbikada ee sanadkan lagu qabtay wadanka Ingiriiska. Orodyahanada caanka ah qaarkood oo matali doona bank-giga caank ah ee ned Bank. Maslax Faarax Ibraahim ayaa ah wiil isku huba in uu ka yool-kaadhi karo masaafadaas uu u babacdhigay in uu ordo.
Lasoco wixii ay ku dhamaato najiida tar tanka in sha allah.
Young Oysu says:
Manshaa Allaah Maslax walaal horay u soco. Guusha maalin bas ah laguma gaadho lkn waxaad samaysaa Training badan una samir wax qabadkaaga bari kamaalin ayaad u baxsan doontaaye. Wax waliba wuxuu u baahanyahay in wakhti la siiyo siiba Sportska waa in loo soo taba bartaa in badan. marka isku day inaad tababare fiican hesho, kadibna waxaad isku daydaa inaad samayso tababarka uu maalin walba tababruhu ku siiyo.